October | 2018 | HimiloNetwork
Himilo October 31, 2018	Leave a comment 278 Views
HELSINKI (Himilonetwork) – Chihuahua Julep, oo ah maqaayad ku taalla bartamaha caasimadda Helsinki ee dalka Finland, ayaa ka mamnuucday macmiisheeda inay ku dhex isticmaalaan moobillada nuuca shaashada leh ‘smartphones’ si ay u dhiirri-geliso is-dhexgalka dhabta ah ee bulshada. Bilowgii hore mamnuucistu waxay ku bilaabatay si ogeysiin iyo tix-gelin ah. Hayeeshe, markii milkiilaha baarka uu dareemay in macmiishu ay ku raaxeysanayaan inay ku ...
Himilo October 31, 2018	Leave a comment 298 Views
MUQDISHO (Himilonetwork) – 29-jir u dhashay dalka Maraykanka ayaa go’aansaday inuu iskaga tago dalkiisa; una guuro xaafad kamid ah xaafadaha fogfog ee dalka Hindiya – si hadda kaddib uusan in badan uga walwalin deynta dulsaarka ah ‘ribada’ oo uu wax ku bartay. Si lamid ah American badan, Chad Haag, wuxuu lacagta wax-barshada jaamacadda ku qaatay qaab amaah ah, hayeeshe wuxuu halgan ...
Himilo October 31, 2018	Leave a comment 530 Views
Warsaw (Himilonetwork) – Buur-fuule u dhashay dalka Poland ayaa – kaddib fuulista buur dalxiiseedka dalkiisa – wuxuu dusheeda ugu tagay bisad yar oo ku sugaysa. Wojciech Jabczynski ayaa rumeysan waayay indhihiisa markii 2,500 mitir oo uu dhulka uga yimid kaddib uu buurta ku arkay mukulaal yar oo dhakada joogta. Qofna ma oga qaabka ay bisadani ku gaartay halka ugu sarreysa ...
Himilo October 31, 2018	Leave a comment 229 Views
Washington (Himilonetwork) – Koox Muslimiin ah oo ku sugan Wake, Waqooyiga Carolina ayaa doonaya in la aqoonsado Maalmaha Fasaxyada ah ee Muslimiintu dabaaldegaan laguna daro jadwalka iskuullada si carruurtooda u u helaan aqoonsi lamida kuwa lamidka ah ee dugsiyada la dhigta. “Way ku adag tahay inay ka baaqdaan iskuulka. Dugsiyada qaar ayaa fasax cudurdaar ah siiya carruurta, laakiin taasi wali ma ...
Himilo October 31, 2018	Leave a comment 253 Views
DUBLIN (Himilonetwork) – Fanaanaddii caanka aheyd oo dhawaan qaadatay diinta Islaamka ee Sinead O’Connor, taas oo hadda la baxday magaca Shuhada’ Davitt ayaa soo qaadatay yeermada salaadda ama ‘aadaanka’ – tallaab aragtiyo kala duwan ay ka bixiyeen dadkii daawaday. Waxyar kaddib salaaddii Jimcaha, Masjidka Weyn ee Ireland waxaa Shudaha Davitt ay ka qaaday Aadaanka salaadda – iyada oo la arkay inay la ...
Himilo October 28, 2018	Leave a comment 314 Views
MUQDISHO (Himilonetwork) – 33-jirka la yiraahdo Cai Yanqiu ayaa saddexdii sanno ee ugu danbeeyey wuxuu ku dalmaray dalkiisa Shiinaha – isaga oo qorshihiisu yahay caawinta dadka hoy la’aanta ah. Sheekadiisu waxay ku bilaabatay maalin isaga oo jooga meheraddiisa ganacsi ayaa waxaa soo agmaray nin caga la’ oo darbi-jiifta kamid ah. Wuxuuna kusoo xusuustay xanuunkii qoyskiisu ka qaadeen geerida walaalkiis 20 sanno ...
Maqaayadda Flooded Cafe – Fadlan haku istaagin Kalluunka.
Himilo October 27, 2018	Leave a comment 351 Views
Hanoi (Himilonetwork) – Maqaayadaha xayawaannada oo marka aad tagto aad kula kulmi karto nuucyada kala duwan ee noolaha sida bisadaha, idaha, eeyaha iyo bakaylaha waxay noqdeen kuwo ku baahaya aduunweynaha oo dhan. Hayeeshe, maqaayadda Amix Coffee waa midda kaliya oo aad adeegeeda ku raaxaysan karto – iyada oo lugahaada hoostiisa ay ku dabaalanayaan malaay ama kalluun yaryar oo midabo kala duwan ...
Himilo October 27, 2018	Leave a comment 256 Views
Milan (Himilonetwork) – Baraha Bulshadu waxay noqdeen bar kulan lama huraan ah soo jiidashada indhaha dadka kala duwan ee ku kulansan halkaas oo dad badan ay magac iyo maamuus ka sameeyaan. Balse, kiis gudihiis, tusaale ahaan, maqaayad ku taalla magaalada Milan ee dalka Talyaaniga waxay cunno fudud oo lacag la’aan siisaa dadka caanka ah ee instagram-ka ku leh followers badan. ...
Himilo October 27, 2018	Leave a comment 276 Views
Delhi (Himilonetwork) – Nin ayaa dhawaan laga soo saaray xabaal uu muddo sideed saacadood ah uu ku duugnaa – isaga oo doonay inuu dib usoo noolaado si uu u noqdo Ilaah ‘God’. Deeraj Kharol, kaas oo muddo badan ku nool macbad lagu magacaabo Karocho ka Kheda ayaan dhawaan ku dhawaaqay inuu go’aansaday nolosha in lagu aaso si uu usoo baxo saddex ...
La kulan: Haweeneydii dhashay 44 carruur ah iyada oo 40-jir ah.
Himilo October 27, 2018	Leave a comment 339 Views
Kampala (Himilonetwork) – Mariam Nabatanzi, haweeney 40-sano-jir ah oo ku nool degmada Mukono waxaa loogu yeeray haweeneyda ugu dhalmada badan kaddib markii lasoo weriyay inay dhashay carruur gaaraysa 44. Gudaha xaafaddeeda Kabimbiri ee bartamaha Uganda, Mariam Nabatanzi waxaa lagu naaneysaa Nalongo Muzaala Bana oo micnaheedu yahay hooyada mataanleyda ah ee dhasha afar dhal mar walba. 18-kii sano ee lasoo dhaafay oo ay xaamilo iyo dhalmo ...